Sazi ngakumbi iinkcukacha zonxibelelwano lwe-iPhone X | IPhone iindaba
UYesu uyasika | | IPhone iindaba, iPhone X
Njengosuku lokumiliselwa kolutsha iPhone X yonyusa umnqweno wokwazi ngakumbi malunga nale iPhone yotshintsho apho iApple ibhiyozela khona Ishumi leminyaka.
Kuyinyani ukuba ekubonisweni kwe-iPhone X sinokubona ngokugqibeleleyo ezona nkcukacha zibalulekileyo zendlela esi sixhobo esiya kuba ngayo, kodwa sifuna ukugxila kwezinye iinkcukacha zonxibelelwano ezingakhange zikhankanywe nzulu kwaye zinomdla wokwenyani.
Siza kugxila kwimiba emithathu esisiseko ye-iPhone entsha eyahluke ngokupheleleyo kwizinyanya zayo ze-iPhone. Le miba yile: isikrini sasekhaya, isikrini esitshixiweyo kunye neziko lolawulo. Makhe siziqwalasele nganye nganye:
1 Isikrini esitshiweyo
2 IPhone X isikrini sasekhaya
3 Iziko lolawulo
Xa sine iPhone X itshixiwe siyabona ukuba zikhona njani ezinye iinkcukacha ezahlukileyo, ngokusengqiqweni, kwiimodeli zangaphambili.
Kwelinye icala sifumanisa ukuba isicatshulwa esisele saziwa "Cinezela iqhosha lokuvula ukuvula" unikezela ngendlela yokubhaliweyo okutsha: «Silayida uvule». Le ingayinguqulelo yombhalo wokuqala "Swayipha ukuze uvule".
Kwelinye icala, zibandakanyiwe iindlela ezimfutshane emazantsi kwesikrini. Kwicala lasekhohlo siya kufumana ukufikelela ngokuthe ngqo kwifayile ye- isibane Isixhobo sethu, ngelixa kwicala lasekunene siya kuba nakho ukufikelela kwifayile ye- ikhamera. Siyakhumbula ukuba kwii-iPhones zangaphambili, ukufikelela kwikhamera kufuneka sityibilike ukusuka ekunene ukuya ekhohlo ukufikelela kuyo ngaphandle kokuvula isixhobo.
IPhone X isikrini sasekhaya
IPhone X entsha iyitshintshe ngokupheleleyo Dock, njengoko kwenzekile kwintsha I-iPad ene-iOS 11. Le Dock intsha izisa. Uyilo kunye Iikona ezijikeleziweyo kunye nokudada ngesithuba esincinci phakathi kwemiphetho yesixhobo.
Njengoko bekunjalo ngoguqulelo lwayo lwangaphambili, ivumela kuphela ukubeka indawo ubuninzi bezicelo ezi-4. Ngasentla kwale Dock, siyaqhubeka ukubona amachaphaza amhlophe abhekisele kwiscreen esikuso.
Enye into entsha esiza kuyifumana kule mveliso intsha ye-Apple iya kuba yile ngezantsi kweDock, sinokubona ibha ebhityileyo oko kuyakwenza ukuba sikwazi tyibilika ukwenza eminye imisebenzi, kubandakanya vala izicelo.
Ayimangalisi into yokuba, usebenzise ngokupheleleyo umboniso kwesi sixhobo indawo yokulawula kuye kwanyanzeleka ukuba kutshintshwe indawo okuyo. Ngoku, nge-iPhone X, kuya kufuneka sityibilike ngaphezulu ukuze sikwazi ukubona iinketho ezahlukeneyo okanye amaqhosha asinikwa liziko lolawulo.
Kude kube ngoku kwikona ephezulu ngasekhohlo sinokubona ifayile ye- ukufihla into ebesinayo kunye igama lomqhubi wethukunye nomgangatho wonxibelelwano WiFi, xa yayiqhagamshelwe.
Kwikona ephezulu ngasekunene sinokubona idatha efana ne ibhetri, i icon ye Bluetooth, la iwotshi okanye lock ukujikeleza isikrini. Kwaye embindini, i intaba.
Ngesikrini esitsha esenziwe ngokutsha ngu-Apple, le bar iye yatshintsha, njengoko sibona kulo mfanekiso ulandelayo.
Ukuya kuthi ga ngoku njengoko sikwazile ukubona, i intaba uya kuskrolela kwikona ephezulu ngasekhohlo, ngelixa ii icon kwi ibhetri, I-WiFi kunye nokugubungela baya kutshintsha amacala, bemi kwikona ephezulu ngasekunene.
Ukuba ujonga emfanekisweni, isithuba sincinci kakhulu ke ezinye ii icon ezinjengeBluetooth, idatha evela kumsebenzisi wethu okanye ialam iya kuvela xa Sityibilika sivela phezulu, njenge ibha yemeko epheleleyo ngakumbi kunye nezo datha zingenakuboniswa ngokungagqibekanga xa sikwisikrini sasekhaya okanye nakuyiphi na enye inkqubo kunye namanye amaqhosha eziko lolawulo.
Njengoko sibona, utshintsho loyilo lwale iPhone X intsha ukufudumeza intloko yabaphuhlisi beappKuba itab ephezulu ebekwe embindini wesixhobo ibangela ukubonwa kweapps ukufuna i umgudu omkhulu kwaye yahluke ngokupheleleyo kuleyo isetyenziselwe iinguqulelo ezidlulileyo ze-iPhone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Sazi iinkcukacha ezithe kratya malunga nembonakalo ye-iPhone X